Public Health in Myanmar: Nutrition Facts အမြစ်-အသဲ ခွဲသိရအောင်
Nutrition Facts အမြစ်-အသဲ ခွဲသိရအောင်
2 Mar 11, 00:50
ကြက်-ဝက်-အမဲတို့ရဲ့ အသည်း-အမြစ်-နှလုံးတွေ ပရိုတိန်းဓါတ်ပါလား။ အသားစစ်စစ်နဲ့ ကွာဟာမှု အရမ်းများလား။
ဘယ်အသားမဆို (ပရိုတင်း) ပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်တွေကရတဲ့ (ပရိုတင်း) ခေါ်ပါတယ်။ အသီးအနှံတွေကလဲရတာမို့ အသားဓါတ်လို့ ခေါ်ရင် မမှန်ပါ။ အသားတွေထဲမှာ သူ့အစိတ်အပိုင်းနဲ့သူ မတူတာတွေ ရှိပါတယ်။ သဘာဝအရ မတူတာရော လူတွေကနေ ပြုပြင် စီမံတာတွေကြောင့်ပါ မတူကြပါ။ အလေးချိန် တိုးအောင်ထိုးတဲ့ ဟော်မုန်းဆေး စုဝေးနေတဲ့နေရာ သပ်သပ်ရှိတယ်။ သဘာဝ အသားထဲမှာ အဆီကတမျိုး၊ အသားကတမျိုး၊ အရိုးကတမျိုး အာဟာရ ဖြစ်တာတွေ မတူပါ။ ထူးခြားတဲ့ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေလဲ ရှိတယ်။ ဥပမာ အမြစ်-အသဲ၊ အထီးကောင်တွေရဲ့ ဖိုသတ္တိပါ-အစိ၊ ငါးကြီးဆီ၊ စတာတွေမှာ ထူးခြားတာတွေ ရှိတယ်။
"အသဲစားတာ သွေးအားနည်းရောဂါအတွက် အလွန်ကောင်းတယ်" လို့ နိုဗယ်ဆုရ ပညာရှင် ၃ ဦးကနေ ၁၉၃၄ ကတည်းက ပြောခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသဲရဲ့အလုပ်က အဆိပ်အတောက်တွေ ရှင်းပေးပေမဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေက သူ့ထဲမှာ စုမနေပါဘူး၊ စားတာ ကောင်းတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။
o (ပရိုတင်း) လဲ ကြွယ်ဝတယ်။ ၁ဝဝ ဂရမ်ထဲမှာ ၁၃၅-၁၄၂ (ကလိုရီ) ရပြီး၊ (ကိုလက်စထော) ၂၇၅-၃ဝ၉ မီလီဂရမ် ပါနေတာတော့ မကောင်းပါ။ ဗီတာမင် ဘီ များတယ်၊ အေ များတယ်။ (ဗီတာမင် အေ များလွန်းတာ ကိုယ်ဝန်အတွက် သိပ်မကောင်းပါ။) စီ နဲနဲပါတယ်။ သွေးအားအတွက်လိုတဲ့ ဘီ ၁၂ အတော်များတယ်။ ဓါတ်ဆားတွေလဲ ပါတယ်။ (ဖေါလိတ်)၊ ကြေးနီ၊ (ဖေါ့စဖိတ်)၊ (ဆယ်လင်နီယမ်)၊ သံဓါတ်၊ သွပ်ဓါတ်၊ (မင်ဂနီးစ်) တွေပါတယ်။ နဲနဲ ပါတာတွေက (ပိုတက်ဆီယမ်)၊ (ဆိုဒီယမ်)၊ (ကယ်လ်ဆီယမ်)၊ (မက်ဂနီဆီယမ်)။
o ကောင်းတဲ့ (အိုမီဂါ-၃) အသင့်အတင့်ပါတယ်။ (ကိုလင်း) လဲ အတော်ပါတယ်။ (ကလိုရီ) နည်းလို့ လူကို မဝစေဘူး။
o စားသောက်ဆိုင်တွေရဲ့ (မီနူး) ထဲမှာ Liver pâté, Liver sashimi, Chopped liver, Foie gras, Leberwurst တွေ့ရင် ဒါတွေဟာ အသဲကို အထူးပြုပြင်စီမံထားတဲံ ဟင်းလျာတွေ ဖြစ်တယ်။ ပုံထဲမှာ နွားကလေး-အသဲနဲ့ ကြက်သွန်နီ၊ ပန်းသီး ရောချက်ထားတာပါ။
o (ကလိုရီ) နည်းတယ်။ ၄၇ ကလိုရီ။ (ကိုလက်စထော) များတယ်။ (ပရိုတင်း)၊ ဗီတာမင် အေ၊ စီ၊ ဘီ-၆၊ ဘီ-၁၂၊ သွပ်ဓါတ်၊ သံဓါတ်၊ (နိုင်ယာစင်)၊ (မင်းဂနီးစ်)၊ သွပ်ဓါတ်တွေပါတယ်။
• ဝက်နှလုံး ၁၂၉ ဂရမ်ကနေ
o (ကလိုရီ) ၁၉၁ ရတယ်။ တနေ့တာ လိုအပ်တဲ့ အဆီ ၁ဝ%၊ (ကိုလက်စထော) ၉၅%၊ (ဆိုဒီယမ်) ၂%၊ ဗီတာမင် အေ ၁%၊ စီ ၄%၊ (ကယ်လ်ဆီယမ်) ၁%၊ ဘီ-၁ ၄၈%၊ နိုင်ယာစင် ၂၅%၊ သံဓါတ် ၄၂%၊ ဘီ ၆ ၂၅%၊ (ပရိုတင်း) ၆၁%၊ ဘီ-၂ ၁၂၉%၊ ဘီ-၁၂ ၈၁%၊ (ဖေါ့စ်ဖိုးရပ်စ်) ၂၃%၊ (မက်ဂနီးစ်) ၈%၊ (နိုင်ယာစင်) ၃၉%၊ သွပ်ဓါတ် ၂၇%၊ ဘီ-၆ ၂၅%၊ (ဖေါလိတ်) ၁% တွေရစေတယ်။
o (ဆိုဒီယမ်) နည်းတာ၊ သကြားမပါတာ၊ သံဓါတ်များတာ၊ (နိုင်ယာစင်) များတာ၊ (ဖေါ့စ်ဖိုးရပ်စ်) များတာ၊ (ဆယ်လယ်နီယမ်) များတာ၊ ဘီ-၂ များတာ၊ ဘီ-၁၂ များတာ၊ သွပ်ဓါတ် များတာတွေက ကောင်းတဲ့ အချက်တွေဖြစ်တယ်။
o (ကိုလက်စထော) များတာက မကောင်းတာ ဖြစ်တယ်။
o ကယ်လိုရီ ၄၂၄၊ အဆီ ၁၉% (ထရန့်-ဖက်) မပြောပလောက်အောင်သာ ပါတယ်၊ (ကိုလက်စထော) ၁၈၂%၊ (ဆိုဒီယမ်) ၆%၊ သံဓါတ် ၉၁%၊ (ကယ်လ်စီယမ်) ၁% ရမယ်။ (ထရန့်-ဖက်) ဆိုတာ မကောင်းတဲ့ ဆီအမျိုးအစား ဖြစ်တယ်။
• အသဲဟာ အာဟာရအတွက် ကောင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ Cholesterol (ကိုလက်စထော) ပါတယ်။ (ကိုလက်စထော) က နှလုံးရောဂါအတွက် မကောင်းပါ။ ကြက်အသဲက အမဲအသဲထက် Calories (ကလိုရီ) နည်းပြီး Cholesterol များတယ်။ အမဲအသဲမှာ Protein (ပရိုတင်း) ပိုများပြီး Fat (အဆီ) နည်းတယ်။ အမဲအသဲမှာ Vitamin A ပိုများပြီး၊ ကြက်အသဲမှာ Iron သံဓါတ် နဲ့ Vitamin C ပိုများတယ်။
မျက်လုံးတိမ်စွဲခြင်း။ ရေတိမ် (Glaucoma)
မြန်မာပြည်တွင် အဖြစ်များသောရောဂါများ ၃။ ဆီးချို၊သေ...
Conception and Pregnancy သန္ဓေတည်ခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ဆော...
Eating Habit (2) သမုဒ္ဒရာ ဝမ်းတစ်ထွာ
Anemia and Blood pressure သွေးအားနည်းတာနဲ့ သွေးဖိအ...
Anemia (အနီးမီးယား) ခေါ် ဒုက္ခသည်ရောဂါတမျိုး
Dermaroller မျက်နှာကို လှအောင် လုပ်တဲ့ကရိယာ
Contraception and Fertility တားဆေး-တားနည်း ဖြတ်ပြီ...
Birth Control How Decide ကိုယ်ဝန် တားနည်း-တားဆေး ဘ...
Contraceptive Injections ကိုယ်ဝန်တား ထိုးဆေးများ
Hepatitis B medical treatment (ဘီ) ပိုးဆေးပေးခြင်း...
Kegel exercises for Men ယောက်ျားများ စိတ်ဝင်စားကြသ...
Pelvic floor exercises အမျိုးသမီးတိုင်းအတွက် လေ့ကျ...
Pregnancy and Ultrasound ကိုယ်ဝန်ဆောင် နှင့် (အာလ်...